स्थानीय तहको पुनःसंरचना भए चैतमा निर्वाचन : प्रमुख आयुक्त | Jwala Sandesh
स्थानीय तहको पुनःसंरचना भए चैतमा निर्वाचन : प्रमुख आयुक्त
| प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ५, २०७३ ::: 314 पटक पढिएको |
दैलेख, असोज ५ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीयको पुनः संरचना भए आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम रहेको बताएका छन् । बुधबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दैलेखको नयाँ भवनको उद्घाट गर्दै उनले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना टुंगो नलागी निर्वाचन हुन नसक्ने बताए ।
कार्याक्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनका लागि आयोगले विभिन्न ६ वटा निर्वाचन सम्बन्धि कान्न संशोधनका लागि सरकारलाई विधेयक मस्यौदा पठाएको र २ वटा यही महिनाभित्र पठाउने जानकारी दिए । उनले स्थानीय निकायको टुंगो लागेपछि सोहीअनुसार आयोगले काम थाल्ने बताए । यद्यपी चुनावबारे केही सम्बैधानिक जटिलतासमेत रहेको उनको भनाई छ । निर्वाचनको मिति कसले तोक्ने भन्नेबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाले कानुनी जटिलता भएको बताए । आयोगले निर्वाचनको मिति आफूले तोक्न पाउनुनपर्ने प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्थाका लागि विधेयक मस्यौदा गरिएको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकार वा आयोग कसैले पनि निर्वाचनको मिति तोक्न नसक्ने बताए ।
उनले निर्वाचनको वातावरण सरकारले बनाउने पर्ने भन्दै आयोगले निर्वाचनका लागि आन्तिकरिक तयारी थालिसकेको बताए । उनले आफू तराईका जिल्लामा जाँदा स्थानीय निकायको निर्वाचनका पक्षमा जनता रहेको पाएको बताए । उनले तराई, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रका जनता निर्वाचनका पक्षमा भएकाले निर्वाचन गराउन कुनै समस्या नहुने बताए । उनले आफू दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनमा पनि आयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै आयोग निर्वाचन निश्पक्ष गर्न सक्षम रहेको बताए । उनले निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च नियन्त्रणका लागि आचारसंहितालाई कडाईका साथ पालना गराउन आयोग क्रियाशील रहेको बताए । उनले निर्वाचनमा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
राजनीतिक दल तथा पत्रकारसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त डा. यादवले सरकार परिवर्तनपछि स्थानीय निकाय निर्वाचनका एजेण्डा अलि पर धकेलिएको बताए । उनले पूर्व सरकारले आगामी मंसिरमा चुनाव गराउने भनेको तर वर्तमान सरकारले चैतमा चुनाव गराउने बताएको जनाए । उनले सरकार र दलहरु निर्वाचनका लागि तयार भए आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए ।
यसअघि कार्यालयको भवन प्रमुख आयुक्त यादवले उद्घाटन गरेका थिए । भवनका लागि जग्गा दान गर्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकृत भक्तबहादुर कार्कीलाई आयोग तथा जिल्लावासीले सम्मान गरेका थिए ।